Gbasara Anyị | TaiZhou HuangYan Yjie Plastics Co., Ltd.
TaiZhou HuangYan Yjie Plastics Co., Ltd. e guzobere na 1996 ma dị na ama ama ngwaahịa plastic, obodo Huangyan nke China. Mgbe 24 afọ mmepe, Yjie ugbu a ghọrọ otu n'ime ndị na-eduga emeputa ke China, lekwasịrị anya na-eme nnyocha, emebe, mmepụta na ahịa nke àgwà ọhụrụ echiche plastic ngwaahịa ndị dị otú ahụ dị ka iko na karama, houseware na ndị ọzọ na OEM & ODM ngwaahịa.
YJie nwere 100 ọkachamara mkpara nke gụnyere banyere injinia, na-emepụta, agadi technicians na ndị ọzọ na ụdị nke n'etiti na elu talent, nakwa dị ka a elu àgwà otu nke ahịa, R & D, mmepụta, management na mgbe-sales ọrụ. Yjie nwere ike inweta ntụgharị kwa afọ nke dollar US 5.
Ruru eru na ISO9001, SA8000 na Sedex audit, Yjie eguzobewo usoro njikwa njikwa mma, na-agafe usoro ọ bụla nke mmepụta. A na-enweta ihe ndị ahụ na Japan & Korea & China. Anyị na-melite ihe onwunwe ule ụlọ nyocha, na mejuputa a nlezianya nnyocha usoro nke ihe na-abata, ngwaahịa nhazi, ngwongwo nnyefe nke ana achi achi "Quality mbụ" si isi iyi na-akwụsị ngwaahịa.
Wokpu Anyị na-eme
Yjie na-Pụrụ iche na R & D, Production na-eme nke plastic iko, plastic ọkpọ, PITA karama, barware na ndị ọzọ ọgwụ & ịfụ plastic ngwaahịa.
Ngwa gụnyere nkwalite, onyinye, mbukota, ime ụlọ, Ogwe na wdg.
Yjie ga-achọ ịkọrọ gị ọhụụ ụlọ ọrụ anyị niile. Dabere na ọhụụ ụwa anyị na atụmatụ anyị, Yjie raara onwe ya nye inye ngwaahịa ụlọ plastik pụtara ìhè na ahịa ụwa niile.
'YJie, nhọrọ kachasị mma maka echiche ọhụrụ nke ụdị ndụ' na-ede akụkọ a.
Nri nri nri anụ ụlọ, Mbukota N'ihi Wine Bottle, Plastic Barware, Barware Set, Nkwado Barware, Unbreakable Barware,